Tsy nahazo LP na marary aza : naverina am-ponja ny filohan’ny Hafari | NewsMada
Tsy nahazo LP na marary aza : naverina am-ponja ny filohan’ny Hafari
Nifanindran-dalana tamin’ny famoahan’ny fitsarana ny valin’ny didim-pitsarana an’Andriamananoro Augustin omaly, niakatra teny amin’ny fitsarana Anosy koa ny raharaha momba ny filohan’ny Hafari Malagasy, Rafanomezantsoa Jean Nirina. Nangataka fahafahana vonjimaika (LP) izy, saingy nolavin’ny fitsarana izany fangatahana fahafahana vonjimaika izany.
Nandritra ny fandalovany teny Anosy omaly, tsikaritra fa ao anatin’ny tsy fahasalamana tanteraka Rafanomezantsoa Jean Nirina. Manaporofo izany ny fisian’ny tavoahangy misy serum izay tsy misaraka aminy. Vory lanona teny amin’ny lapan’ny Fitsarana Anosy koa ireo mpanara-dia azy ary niteraka fimenomenomana teo amin’ny sasany amin’izy ireo izany. Nilaza izy ireo fa tsy misy mihitsy ny fanajana ny zon’olombelona satria ao anatin’ny tsy fahasalamana ny filohan’ny Hafari Malagasy nefa tsy misy akory ny fijerena ny zon’olombelona manoloana izao tsy fahasalamany izao.
Tsiahivina fa tratran’ny aretina tampoka teny amin’ny fonjan’Antanimora izy ka voatery tsy maintsy naiditra hopitaly haingana noho izany tsy fahasalamany izany. Isan’ilay raharaha anenjehana azy ny hoe fisandohana andraikitra sy fitazonana olona an-keriny.